ị bụ ebe a: Home ihu Ọgwụ Ìhè anam-elu maka anya agba aja aja
Brown-eyed ụmụ agbọghọ nwere ike na-enweghị ikwubiga okwu ókè-akpọ kasị nwee obi ụtọ, n'ihi na ọtụtụ n'ime ha na-ele anya nnukwu na mara mma ọbụna na-enweghị etemeete. Ọ bụrụ na anyị lee anya na ìhè anam-elu maka anya agba aja aja, mere site ọkachamara anam-elu artists, Ọ na-adị mfe deere ọzọ na-emekarị - ọ na-naanị na a chọrọ ka, mesie ùgwù nke data ọdịdị, na anya, n'ozuzu, Ọ na-riveted n'anya.
The eke ala nke aja aja-eyed beauties enye Mkpa ọkụ shades. Otú ọ dị, ọbụna ndị na-egbuke egbuke na agba na aja aja anya mgbe anya mfe, Ya mere kwesịrị ekwesị n'ihi na mfe meykapa. Otú ọ dị, aja aja anya na-adị iche: -malite n'ìhè ruo ihe fọrọ nke nta nwa. Nwe nke a ìhè-agba aja aja uwe ndò nke-acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo hues, a girl na ọchịchịrị aja aja anya na-atụ aro pink na ndị ọzọ na-egbuke egbuke na agba nke onyinyo.
Ngwa Usoro mfe etemeete n'ihi na anya agba aja aja na-adabere na ọtụtụ ihe, gụnyere ọrụ dị mkpa egwuri site akpụkpọ ụdị. Ọ bụrụ na akpụkpọ - ọchịchịrị, nkịtị anam-elu bụ iji a matte onyinyo predominantly pastel shades. Ozu mkpa gbaziri ọzọ, na ihiere erughị. Ọ bụrụ na anụ bụ na-egbuke egbuke, ọ ga-elekwasị anya na ìhè n'ụwa aj u, n'ihi na ihe atụ, coral, kọfị ma ọ bụ peach.
Ka mmezi akpụkpọ ụda, ọ bụrụ na e dị otú ahụ a mkpa, kwesịrị iji concealer, nke no na-ewepu nācha ọbara-ọbara ma ọ bụ podglaziny. Ntụ ntụ kwesịghị iji ihe mgbe niile, dị ka ọ ga-enye anụ ahụ ụfọdụ, emesi ike ọbụna n'onye kasị nta wrinkles.
Nkebi ite ihe ntecha:
na-amalite itinye onyinyo Mkpa ọkụ ndò nke niile nkuchianaya metụ;
mgbe ahụ a na-acha ọcha ma ọ bụ Milky agba, na ebe n'okpuru brow na ime-ime nkuku nke anya;
ndo Mkpa ọkụ ụda nke ahọrọ ụzọ maka meykapa etinyere mkpa Kisochka tinyere ciliary ihu (-atụ aro, ka ndo kpuchie a atọ nke a na narị afọ nke Rolling elu);
darker na agba na-eji dị ka a liner maka mfe nhọrọ nke mpụga akụkụ nke anya na ala mkpuchi.
Ma mascara, na ìhè anam-elu maka anya agba aja aja Ọtụtụ ya agụnye iji ihe black. Brown anya na ọtụtụ eke, on ọchịchịrị n'anya na-adị mfe furu efu. Touche etinyere otu oyi akwa, na na zhelaenie eme ka N'ụbọchị nke abụọ lashes tupu n'itinye mascara nwere ike ịbụ a obere ntụ ntụ uzo powder.
Nke ahụ bụ niile. Natural anam-njikere. Ọ na-anọgide na-enwe a mara mma nke ọdịdị.
Mgbede anam-elu maka anya agba aja aja